အကောင်းဆုံး GJCNC-BMA ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံ။ | Gaoji
၁။ မက်စ်ဘတ်ဘားဘတ်အရွယ်အစား - ၁၅ * ၁၄၀ မီလီမီတာ
၂။ Min Busbar အရွယ်အစား - ၃ * ၃၀ * ၁၁၀ မီလီမီတာ
3. မက်စ် torque: 62 Nm
Ballscrew ၏ 4. Min အချင်း: ∅32မီလီမီတာ
Ballscrew ၏အစိုင်အခဲ - ၁၀ မီလီမီတာ
CNC busbar စက်ကြိတ်စက်သည်အဓိကအားဖြင့်ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် busbar တွင်ကြီးမားသောအသားလွှာတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်ပရိုဂရမ်ကုဒ်ကိုအလိုအလျောက်ထုတ်ပေးပြီး busbar သတ်မှတ်ချက်နှင့်လိုအပ်သောအချက်အလက်များအပေါ် မူတည်၍ display မျက်နှာပြင်ပေါ် အခြေခံ၍ ပစ္စည်းများကိုစက်ကိုပို့ပေးသည်။ ၎င်းသည်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူပြီးလှပသောအသွင်အပြင်ဖြင့်အသုံး ၀ င်သော busbar arc ကိုစက်တပ်နိုင်သည်။
ဤစက်သည်H≤3-15mm, w≤140mmနှင့်L≥280mmနှင့် busbar ခေါင်းများအတွက် sectional arc machining ပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။
workpiece ၏တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေရန်၊ ပိုကောင်းသောစက်မျက်နှာပြင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသရန်အတွက် booster ကိုဖိခေါင်းပေါ်တွင်အသုံးပြုသည်။
ကမ္ဘာ့စံချိန် BT40 ကိရိယာကိုင်ဆောင်သူကိုလွယ်ကူသောဓါးဖြင့်အစားထိုးခြင်း၊
ဤစက်သည်တိကျသောဘောလုံး screw နှစ်ခုနှင့် linear လမ်းညွှန်များကိုအသုံးပြုသည်။ တုန်ခါမှုနှင့်ဆူညံသံကိုလျှော့ချရန်၊ အပိုပစ္စည်း၏အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ထိရောက်မှုရှိစေရန်အတွက်လေးလံသောအကြီးစားလမ်းညွှန်ရထားများကိုရွေးချယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းနှင့်ကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်များ၏အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြု၍ ဤစက်သည်သက်တမ်းရှည်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသည်။
ဤစက်တွင်အသုံးပြုသောပရိုဂရမ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတီထွင်ထားသောအလိုအလျှောက်ဂရပ်ဖစ်ပရိုဂရမ်းမင်းဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည်။ အော်ပရေတာသည်သင်္ကေတအမျိုးမျိုးကိုနားလည်ရန်မလို၊ ရိုးရာစက်ကိရိယာမည်သို့လည်ပတ်ရမည်ကိုလည်းသူသိမည်မဟုတ်ပါ။ အော်ပရေတာသည်ဂရပ်ဖစ်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းအားဖြင့် parameters များစွာကိုရိုက်ထည့်ရမည်ဖြစ်ပြီးစက်ပစ္စည်းသည်စက်ကုဒ်များကိုအလိုအလျောက်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်လက်စွဲပရိုဂရမ်းမင်းထက်အချိန်တိုတောင်းပြီး manual programming ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောကုဒ်မှားယွင်းမှုကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
ဤစက်တွင်တပ်ဆင်ထားသော Busbar သည်နေရာချွေတာရန်နှင့်ကြေးနီသုံးစွဲမှုကိုသိသိသာသာလျှော့ချရန်အတွက် ၀ န်ကြီးဌာန၏အရွယ်အစားကိုကျဉ်းမြောင်းစွာမထားပါ။
ရှေ့သို့ CNC Bus Bus ပြုတ်စက် GJCNC-BD
အတိုင်းအတာ (mm) အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) အလုပ်လုပ်စားပွဲအရွယ်အစား (mm) လေကြောင်းအရင်းအမြစ် (Mpa) စုစုပေါင်းပါဝါ (kw)
2500 * 2000 3300 350 * 900 0.5 ~ 0.9 ၁၁.၅
Moter ပါဝါ (kw) ၇.၅ Servo ပါဝါ (kw) ၂ * ၁.၃ မက်စ် Torpue (Nm) 62
Tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမော်ဒယ် BT40 ကိရိယာအချင်း (mm) 100 ဗိုင်းလိပ်တံ၏အမြန်နှုန်း (RPM) 1000
ပစ္စည်းအကျယ် (mm) 30 ~ 140 min ပစ္စည်းအရှည် (mm) 110 ပစ္စည်းအထူ (mm)3~ 15
X ဝင်ရိုးစတုတ် (mm) 250 Y-Axis Stoke (mm) 350 လျှင်မြန်သောအမြန်နှုန်း (mm / min) 1500
Ballscrew ၏အစွန်အဖျား (mm) 10 ရာထူးတိကျမှု (mm) ၀.၀၃ အစာကျွေးခြင်းမြန်နှုန်း (mm / min) 1200